Dingana fito eo amin'ilay lalana ny finoana | Apg29
Ny dingana voalohany amin'ny lalan'ny finoana.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratana ho an'ireo izay efa nandray an'i Jesosy ka voavonjy.
Voalohany, tiako ny miarahaba anao izay efa nandray an'i Jesosy ary natao voavonjy! Izany no zavatra tsara indrindra izay mety hitranga amin'ny olona. Ankehitriny dia manomboka fiainana vaovao mahafinaritra ho anareo amin'i Jesosy Kristy.
Na dia ny lava indrindra dia manomboka amin'ny dingana, nisy olona nanao hoe:. Izany no zava-dehibe indrindra raha ny amin'ny finoana mandeha. Fa ankehitriny ianareo no namonjena sy any an-danitra, izany tsy midika fa izao tena mandroso amin'ny faritra ny finoana. Fa izany rehetra izany manomboka izao. Ankehitriny ianao dia afaka hanana sy mianatra ny hahafantatra bebe kokoa an'i Jesosy mihitsy aza.
Eritrereto ny zaza vao teraka: Moa tsy mivoatra tsara amin'ny fomba feno? Tsy afaka hanomboka hihazakazaka, hitsambikina, dihy ary hihazakazaka ny hazakazaka fiara avy hatrany? Tsia, fa raha misy mahazo mitombo, manomboka manao toy izany angamba dia afaka mihazakazaka ny hazakazaka fiara, rehefa tonga ny fotoana ho azy.
Ity boky kely ity dia tokony ho momba ny dingana voalohany eo amin'ny lalan'ny finoana. Ianao tsy tena mandroso satria izao teraka ao amin'i Kristy. Mety hitranga izany ho anareo, tahaka ny zaza, ka dia latsaka mamely anao. Tsy ianao. Fa aza kivy. Mitsangàna, ka mandehana miaraka amin'i Jesosy eo amin'ny lalan'ny finoana!
Ny dingana voalohany
Ny dingana voalohany izay efa naka. Izay rehefa nanontany an'i Jesosy ho tonga ao am-ponao.
Ao amin'ny Romanina toko faha-10 sy ny andininy faha-9 milaza izao:
"Fa raha manaiky amin'ny vavanao ianao fa i Jesosy no Tompo sy mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin'ny maty, dia hovonjena ianao."
Ny teny hoe voavonjy fotsiny dia midika hoe "voavonjy"! Tsy midika izany hoe mazoto izy ireo, tia sy ny hafanam-po na inona na inona. Rehefa nandray an'i Jesosy, aho voavonjy fotsiny - voavonjy!
Voavonjy - from inona? Tafavoaka velona ianao, ankoatra ny zavatra hafa, amin'ny ota sy ny tsy ho very any amin'ny helo mandrakizay!
Mba ho voavonjy, dia tsy maintsy miaiky mafy ny vavany fa i Jesosy no Tompo sy mino fa Andriamanitra efa nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty. Raha manatanteraka ireo fepetra roa, ho fantatrareo amin'ny 100% antoka fa voavonjy ianao ankehitriny. Ahoana no ahafantaranao izany? Eny, satria hoy ny Baiboly izany! Zava-dehibe ny matoky ny Baiboly, raha ny zavatra toy izany. Afaka mandeha na oviana na oviana izay ny fihetseham-po no nanao hoe:. Fihetseham-po dia afaka indray andro any hoe: "Oh, dia tena mahafinaritra fa voavonjy aho," ary ny andro faharoa, angamba tsy tena mieritreritra hoe tsy voavonjy. izany
dia tsy mikasika ny "mahatsiaro", fa inona no tena milaza ny Baiboly! Hanao ianao hikambana amin'ny fitsipika tsotra io dia dia hahita soa ho anareo eo amin'ny lalan'ny finoana.
Ao amin'ny finoana tongotra lavitra, dia mety tojo vato misakana isan-karazany. Ary zava-dehibe ny hifikitra amin'i Jesosy. Raha manao izany ianao, dia handeha any amin'ny lalana sy ny finoana dia lasa matanjaka kokoa.
Misy karazany roa ny olona, ​​rehefa fitsapana sy fahoriana. Ny iray tamin'izy ireo handositra avy Jesosy. Ny faharoa dia handositra ho any Jesosy. Tsy ny mandositra hiala Jesosy sy ny fihemorana amin'ny finoana. Aiza raha tokony handositra an'i Jesosy, ka ho lasa matanjaka amin'ny finoana.
Raha ny zaza dia hianatra handeha, dia ho levona. Izy no lavo sy hanorim-ponenana. Fa mbola ho mafy loha, mitsangàna ary andramo indray. Ity fitsipika ity no zava-dehibe aminao. Dia mety ho fa hamely ny lalan'ny finoana. Aza hitoetra any ka kivy. Mitsangàna, mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra, ary hifindra amin'ny amin'i Jesosy.
Amin'ny maha-mpino vaovao ary efa azo antoka fa zavatra vitsivitsy niaraka tamin'ny entany izay tsy tsara. Momba izany, dia ho tsara rehetra. Tsy maintsy manaraka an'i Jesosy sy hiara-mandeha Aminy. Zavatra tsy tsara ao amin'ny entany dia hanampy anao mba hanaisotra ny, rehefa tonga ny fotoana. Ny zava-drehetra dia tsy hanjavona avy hatrany rehefa nanaiky an'i Jesosy ka voavonjy, nefa hanjavona amin'ny fotoana. Io fa teny iray hafa antsoina hoe fanamasinana.
Izaho koa te-lazaina ao anatin'ity lohahevitra ity fa dia tena mahazatra ny mpino vaovao ela na ho haingana dia hahazo ny fisalasalana goavana fanafihana. Eny, tsy mahazatra ihany, saingy foana izany! Mety ho aloha, dia mety ho tonga tatỳ aoriana, nefa dia!
Ao amin'io isalasalana fanafihana no ho farany, raha tiantsika ny hanohy ny hanaraka an'i Jesoa na mahazo miverina aminy ny fiainana taloha. Raha misafidy i Jesosy no finoana ho matanjaka sy mafy orina!
Ny dingana faharoa
Ary ny zaza dia ho faty raha tsy mahazo sakafo. Toy izany koa ny eo aminareo. Mila sakafo ara-panahy. Aza mahazo azy, ianao tsy ampy sakafo ara-panahy ary farany dia ho faty ara-panahy amin'ny finoanareo.
Ahoana no mahazo ny hanina? Afaka mahazo ny sakafo amin'ny fomba samihafa. Ankoatra ny zavatra hafa, dia afaka mihinana ny tenanao. Manao izany ianao amin'ny alalan'ny famakiana ny Baiboly. Raha toa ianao ka vaovao ny mamaky ny Baiboly dia manoro hevitra ny mba hanomboka ao amin'ny Testamenta Vaovao (izay ny ampahany hafa amin'ny Baiboly), ary vakio ao amin'ny Filazantsaran'i Marka. Izany no hanomboka. Avy eo, mazava ho azy, hanohy hamaky ny Baiboly manontolo.
Misy ireo izay miezaka mamaky ny Baiboly hatramin'ny farany. Amin'ny maha-mpino vaovao, izany no Sarotra ny Manao. Vakio manohy ny toko ao amin'ny Testamenta Taloha (fa izany no tapany voalohany amin'ny Baiboly), sy ao amin'ny Testamenta Vaovao isan'andro. Avy eo dia ho hitanao fa hitombo ny finoanao.
Azonao atao koa ny mahazo sakafo amin'ny alalan'ny rehefa nanompo! Izay mahazo ny Kristianina handeha fiangonana izay mitory ny Tenin'Andriamanitra sy ny ara-Baiboly an'i Jesosy! Manoro hevitra anareo aho mba hifandray ny fiangonana ao amin'ny faritra misy misy anao. Ianareo no tsy mandeha any am-piangonana aho dia afaka ny ho faly hanampy anao amin'izany fifandraisana. Na, raha mitodika any amin'ny Kristianina voavonjy izay atokisanao. Noho izany, dia azo antoka fa afaka manampy anao.
Ahoana no ahafantaranao raha ny Assemblée manan-jo hianatra? - manaiky ny Tompo Jesosy, tsy voatery ho natahotra.
Ny dingana fahatelo
Ary midika izany fa maimaim-poana ianao vavanao Jesosy. Jesosy efa namonjy anao ka
te-hanana firaisana aminao. Te hiresaka aminao, ary ianao mahazo miresaka aminy. Izany no zava-dehibe.
Raha tia olona iray ianao, ianao mazava ho azy fa tsy miezaka miresaka izany olona izany. Toy izany koa fa tamin'i Jesosy. Tsy mila hampikorontana na ny fihenjanana ara-pivavahana misy hozatra. Tsia, fa voajanahary. Miresaha aminy isan'andro. Lazao fa manana azy io, ary mandany fotoana aminy. Fa tiany.
Tsy afaka mitondra tsara ny zava-miafina rehetra, vavaka eto, fa te-hampahery anao amin'ny zavatra iray: Tian'Andriamanitra ianao mba hivavaka. Miantso izany im-betsaka ao amin'ny Baiboly.
Ao amin'ny toko faha-21 sy ny andininy faha-22, nilaza izany i Jesosy ao amin'ny Filazantsaran'i Matio:
"Na inona na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana dia ho azonao ny, araka ny hevitrao."
Hoy i Jesosy, dia eto dia afaka mahazo valim-bavaka momba ny na inona na inona no mangataka!
Afaka mivavaka amin'i Jesosy, fa i Jesoa koa dia mamporisika mba hivavaka mivantana amin'ny Ray amin'ny anaran'i Jesosy. Araka ny nampanantenainy ny valim-bavaka! Toy izany ny teny fikasana, Hoy i Jesosy ao amin'ny Jaona toko faha-16 sy ny andininy faha-23:
"Amin'izany andro izany dia tsy hanontany ahy na inona na inona momba ny. Amena, amena, lazaiko aminareo: Na inona na inona angatahinareo amin'ny Ray amin'ny anarako, dia homeny anareo. "
Aza adino ny misaotra an'Andriamanitra fa efa namonjy anao. Misaora ny zavatra nataon'i Jesosy ho anao. Dia maty izy ary natsangana tamin'ny maty. Fa izy mbola velona ankehitriny ary efa voavela ny fahotanareo rehetra. avy eo ny
izany no tena ho anao sy ny finoanareo lasa matanjaka kokoa.
Rahoviana ianao no manontany? Ny valiny mahazo ny Baiboly ianao ao amin'ny toko faha-5 Tesaloniana Voalohany sy ny andininy faha-17:
"Aza mitsahatra mivavaka."
Ny dingana fahefatra
Ao amin'ny Asan'ny Apostoly toko faha 2 sy ny andininy faha-38 i Petera namaly ny olona izay ho ataony:
"Hoy i Petera: 'Mibebaha ary aoka hatao batisa amin' ny anaran 'i Jesoa Kristy mba ny fahotanareo, mba ho famelan-keloka. Ary ianareo dia handray ny Fanahy Masina ho toy ny fanomezana. ' "
Ny olon-drehetra dia avy eo mibebaka, ary natao batisa. Milaza ny Baiboly fa tokony manaiky hatao batisa. Rehefa manao izany, manana fampanantenana koa: mba hanome anareo ny Fanahy Masina ho fanomezana! Tamin'ny andron'ny Baiboly, anisan'izany ny famonjena ny izany zavatra telo loha: ny fibebahana, ny batisa ary ny Fanahy Masina ho fanomezana.
Tokony manaiky hatao batisa amin 'ny anaran' i Jesoa Kristy. Ianao manao batisa anao raha any am-piangonana na anarana, nefa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao batisa na ny zavatra manokana, saingy mbola tao amin'i Jesosy.
Atao batisa ianao amin'ny alalan'ny rehefa naroboka tanteraka tao anaty rano, ary avy eo indray ny Baiboly milaza ao amin'ny Romanina toko faha-6 sy ny andininy 3-4;
"Sa tsy fantatrareo fa isika rehetra izay no natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Noho izany isika tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana; niara-nalevina taminy, mba ho velona isika, koa fiainana vaovao, tahaka an'i Kristy natsangana tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny Ray. "
Ny batisa dia ny fibabohana ny tontolo iainana izay an'i Jesosy ankehitriny. Ianao no natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy, ho foana ny azy! Ny batisa dia marika fa ankehitriny efa nibebaka tamin'Andriamanitra.
Ao amin'ny Marka toko faha-16 sy ny andininy faha-16, i Jesosy hoe:
"Na iza na iza mino sy atao batisa no hovonjena, fa izay tsy mino no hohelohina."
Ny dingana fahadimy
Atao batisa ao amin'ny Fanahy!
Raiso ny Fanahy Masina ho fanomezana! Izany dingana Efa nanohina on. Mila hery mba hiaina ho toy ny Kristianina i Jesosy ary hanao izay efa nandidiany anao. Ianao koa mila fanampiana ao amin'ny isan'andro mandeha amin'i Jesosy.
Jaona toko faha-14 sy ny andininy 16-17, hoy i Jesosy izao:
"Ary Izaho hangataka amin'ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra hafa mba ho eo aminareo, dia ny Fanahin'ny fahamarinana, Izay tsy azon'izao tontolo izao. Fa izao tontolo izao hitany sady tsy fantany izy. Ianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo. "
Eto dia milaza fa izao tontolo izao dia tsy afaka handray ny Mpampionona, fa mamela anao mino an'i Jesosy. Ny Fanahy Masina dia fanomezana fa manaiky amin 'ny finoana. Toy izany koa no nahazo an'i Jesosy!
Rehefa avy nandray ny Fanahy Masina mba hahafahanao manomboka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra araka ny voasoratra eo Asan'ny Apostoly toko faha-2 sy ny andininy faha-4:
"Ary izy rehetra feno ny Fanahy Masina, ary dia niteny tamin'ny fiteny maro samy hafa, araka ny nampitenenan'ny Fanahy Masina azy."
Rehetra dia feno ny Fanahy Masina ka dia niteny amin'ny fiteny rehetra. Hoy ny samy hafa fiteny any amin'ny toerana hafa ao amin'ny Baiboly. Ohatra, ao amin'ny Asan'ny Apostoly toko fahafolo ao amin'ny andininy 45 sy 46:
"Jiosy, ny mpino rehetra, izay niaraka tamin'i Petera talanjona
fa ny Fanahy Masina ny fanomezana no nilatsaka tamin'ny jentilisa koa. Fa nandre azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy midera an'Andriamanitra. "
Ao amin'ny Asan'ny Apostoly toko faha 1 sy ny andininy faha-8, Hoy i Jesosy:
"Fa rehefa tonga ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny tany."
Ny dingana fahenina
Mijoroa ho vavolombelona an'i Jesosy!
Lazao ny hafa momba ny finoana an'i Jesoa Kristy. Aza tsy mitandrina dia hazòny ho anao. No namonjena anareo, voavela heloka sy manana ny fiainana mandrakizay. Aoka ny olon-kafa koa ny miaina toy izany koa.
Ao amin'ny Asan'ny Apostoly toko faha 4 sy ny andininy faha-20 milaza mahagaga izany fiaiken-keloka:
"Izahay, noho ny anjara tsy mahazo milaza ny zavatra efa hitanay sy renay."
Mba hilaza ny olona hafa momba an'i Jesosy no tsara indrindra sy ny fomba mahomby indrindra-tena hitombo ary ho tonga matanjaka eo ny finoany.
Fa Saoly kosa, tatỳ aoriana atao hoe Paul, dia voavonjy, dia nanomboka avy hatrany ho vavolombelona manambara sy miteny aminy ny momba an'i Jesosy. Amin'ny maha-setrin 'izany, dia nahazo hery bebe kokoa. Azonao vakina ao amin'ny Asan'ny Apostoly toko faha-9 sy ny andininy faha-22:
"Ary Saoly dia tonga bebe kokoa ny hery sy ny Jiosy izay nonina tany Damaskosy, tahaka ny nanaporofo fa i Jesosy no Mesia."
Aza menatra noho ny amin'i Jesosy. Rehefa mijoro ho ny zavatra inoanao, ny olona ho faly hijery ny anao. Ianao no tanteraka tamin'i Jesosy.
"Fa ny fo feno, olona no lazain'ny vavany."
Izany Jesosy izany dia milaza ao amin'ny Lioka toko faha-fahenina eo amin'ny andininy faha 45. Raha izany dia zavatra isika in-mpankafy ny toy izany baolina kitra, noho izany dia tsy olana miresaka momba azy io miaraka amin'ny namana. Tsy amin'ny fomba rehetra manao ny ezaka. Izany fotsiny mikoriana ao. Ankehitriny, mazava ho azy, i Jesosy nanova ny fiainantsika. Tokony izahay no tsy milaza ny momba azy ho olon-kafa?
Ny dingana fahafito
Hihazona an'i Jesosy!
Na inona na inona mitranga: Tano mafy ny an'i Jesosy! Aza avela haka na inona na inona anao ny handao azy. Izy no zavatra tsara indrindra izay nanjo anao!
Ve ianao hifikitra amin'i Jesosy hatramin'ny farany indrindra, dia hahazo Li vets satro-boninahitra any an-danitra! Izany Jesosy izany dia milaza ao amin'ny Apokalypsy 3 sy ny andininy faha-11:
"Tsy ho ela. Mihazona izay anananao, mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao. "
Ireo rehetra ireo fito ireo dingana voalohany fotsiny. Izany no izay tonga izany:
- mandeha amin'i Jesosy efa nanomboka!